Mụọ otu esi wụnye Nokia Z Launcher na gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Z Launcher bụ ngwa na-atọ ụtọ na-atọ ụtọ nke anyị nwere ike ibudata ma wụnye ugbu a, ọ bụrụ na anyị chọrọ nwere ngwaọrụ ngwaọrụ gam akporo a haziri nke ọma. Emeputara ngwa oru a na Wednesde gara aga, nwee ọtụtụ ndị na-eso ụzọ afọ ojuju maka ihe Nokia kwuru.
Ọ bụrụ na ị maghị, Nokia bụ onye nrụpụta ngwa ahụ akpọrọ Z Launcher, nke dakọtara na ụdị ụfọdụ nke ekwentị na ngwaọrụ mkpanaka n'ozuzu ha. N'oge ahụ, a chọrọ ngwá ọrụ maka sistemụ arụmọrụ gam akporo, ebe ọ mara ọkwa na n'oge na-adịghị anya (ọ bụrụ na Apple kwere ya) a ga-enwekwa ụdị nke mobile ngwaọrụ na iOS; Otú ọ dị, Z Launcher dị na ọkwa beta ya mere, enwebebeghị ya na Playlọ Ahịa Google n'ihi na ndị na-emepụta Finnish chọrọ ka nbudata ahụ mee site na otu saịtị saịtị ahụ. Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu Kedụ ka m ga - esi budata ma wụnye Launcher na ngwa gam akporo m?
Nzọụkwụ iji wụnye Z Launcher na ngwaọrụ gam akporo anyị
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ihe Z Launcher na-anọchite anya ya, anyị na-atụ aro ka ị nyochaa akụkọ a bipụtara awa ole na ole mgbe ọ malitere site na njikọ ndị a. N'ihi na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ chọrọ ịnweta ngwa gam akporo a na ngwaọrụ mkpanaka ha, ndị na-ewere onwe ha dị ka ndị ọrụ toro eto enwebeghị nsogbu ọ bụla mgbe ha na-arụ ọrụ a; ma enwekwara ndị ọrụ novice na obodo gam akporo a, onye, ​​ghara ịchọta ngwá ọrụ na ụlọ ahịa Google Ha akwụsịla ịnwa ịnwe ya na ọdụ ha, ọ bụ ya mere anyị ji rara onwe anyị nye isiokwu a ebe anyị ga-egosi nzọụkwụ site na nzọụkwụ yana ihe onyonyo gụnyere, gbasara usoro a ga-emerịrị iji mezuo ebumnobi anyị:
Mbụ anyị na-amalite anyị gam akporo sistemụ.
Ozugbo anyị nọ na desktọọpụ, anyị na-achọ akara ngosi nke Nhazi (ma ọ bụ Ntọala).
Anyị ga-abanye ebe ahụ site na iche iche interface.
Ozugbo anyị ruru, anyị ga-aga tab Nche site n'akụkụ aka ekpe.
N'ebe ahụ, anyị ga-elele igbe nke na-enye ikike ntinye nke ngwa sitere na isi mmalite amaghị.
Ozugbo anyị mechara usoro anyị tụrụ aro n'elu, anyị dị njikere ịnwale budata ma wụnye Z Launcher na ngwaọrụ mkpanaka anyị; Okwesiri ikwuputa na usoro a emeela ka ọnụ ụzọ meghee ka ngwa ndị na-esiteghị na ụlọ ahịa Google play nwee ike ịwụnye, n'ihi na Nokia etinyela ngwa ahụ na beta mbipute, n'ime saịtị ọrụ ya.
Ugbu a, anyị ga-agakwuru ya Mbido site na ngwaọrụ gam akporo anyị.
Ozugbo anyị ga-ahọrọ akara ngosi ihe nchọgharị Internetntanetị.
Anyị ga-aga gọọmentị Z Launcher webụsaịtị webụsaịtị
Anyị ga-emetụ nhọrọ nke ga-enyere anyị aka ibudata ụdị beta.
N'oge usoro nwụnye, a ga-egosipụta windo nke ga-agwa anyị na ị ga-enweta ụfọdụ ozi na ngwaọrụ mkpanaka anyị; Anyị ga-anabata windo a n'agbanyeghị, anyị nwekwara ike iwepụ ngwa ahụ ma ọ bụrụ na anyị achọghị ka ikikere ndị a rụọ ọrụ.
Window na-esote ga-egosi na ngwa ahụ ga-amụta site na omume anyị na njedebe. N'ebe a, anyị ga-pịa nhọrọ ahụ Malite.
A obere nkuzi ga-apụta na windo na-esote, ihe anyị ga-agbaso iji mụta ntakịrị ntakịrị gbasara otu Z Zunụ si arụ ọrụ.
Ngwa niile awụnyere na gam akporo ngwaọrụ ga-egosi na ndepụta na windo na-esote.
Ruo oge a ugbua anyị arụnyere ma hazie Z Launcher na ọdụ anyị, ịghara ime ihe ọ bụla ọzọ iji bido ịrụ ọrụ na onye ọhụụ ọhụrụ nke Nokia chọrọ; Mgbe anyị chọrọ ịchọta ngwa a kapịrị ọnụ, anyị ga-eji mkpịsị aka anyị see na ihuenyo ahụ, akwụkwọ ozi nke ngwa ọrụ ahụ, na-apụta ozugbo na nsonaazụ ole na ole dabere na ihe anyị etinyela na ngwaọrụ mkpanaka gam akporo. N’etiti nsonaazụ ya, ụfọdụ kọntaktị anyị nwekwara ike ịpụta, ọ bụrụhaala na anyị nwere ngwa metụtara ndepụta ndị a.
Dịka anyị nwere ike ịmasị, Z Launcher bụ ezigbo ihe ngwọta maka ndị chọrọ nwee tebụl a haziri ahazi ma dị mfe iburu na ngwa gị ọ bụla arụnyere na ọnụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Etu ibudata ma wụnye Z Launcher na ngwaọrụ gam akporo anyị
Jirikwa DNSCrypt jirichaa nzuzo anyị na Windows